युगसम्बाद साप्ताहिक - मौन अवधि, के गर्नु हुँदैन ?
Thursday, 05.28.2020, 04:19am (GMT+5.5) Home Contact
मौन अवधि, के गर्नु हुँदैन ?
काठमाडौं । पर्सी २१ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत दोस्रो चरणको मौन अवधि सोमबार मध्यरातिबाट शुरु भएको छ । निर्वाचन हुने ४५ जिल्लामा चुनावको मौन अवधि मध्यराति १२ बजेबाट शुरु भएको हो ।
मौन अवधि शुरु भएपछि मतदान नसकिएसम्म निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न र कुनै पनि माध्यमबाट भोट माग्न पाइँदैन । एसएमएस, भाइबर, फेसबुक लगायत कुनै पनि माध्यमबाट भोट माग्न नपाइने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । मौन अवधिमा चुनाव प्रचार गरेमा वा कसैले भोट मागेमा एक लाख रुपैयाँ जरिवानादेखि उम्मेदवारी रद्ध गर्नेसम्म अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ ।
साथै मतदान केन्द्रको तीन सय मिटर वरिपरि राखिएका आआफ्ना निर्वाचन चिहृन र प्रचार सामग्री पनि दलहरुले हटाएको हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
सोमबार मध्यरातपछि भोट माग्न नपाइने भएकाले दलहरु अन्तिम दिनको चुनाव प्रचारमा व्यस्त रहे । उनीहरुलाई मतदातासम्म पुग्न भ्याइनभ्याइ थियो । कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरु आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा परिचालित छन् ।